ဘိုးဘွားများကို ခြေလက်ဆေးပေးဆုတောင်းစကားခံယူခြင်း။ (รดน้ำขอพรผู้ใหญ่)
ခရိုင်တစ်ခုနှင့် တစ်ခုခရီးသွားလာ၍ရခြင်း။ (เดินทางข้ามจังหวัด)
လေဝင်ထွက်ကောင်းသော လေဟာပြင်များတွင် ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်း။ (จัดงานในพื้นที่โล่ง อากาศระบายได้ดี)
လူစုဝေး၍ ရေပက်ကစားခြင်း။ (รวมกลุ่มสาดน้ำ)
D-M-H-T-T စည်းမျဥ်းအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ (ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T)
ဒါ့အပြင် ကိုဗစ်-19 ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးဗဟိုဌာနမှ အရေးပေါ်အမိန့်သက်တမ်းကို 1 ရက်4လမှ 31 ရက်5လ 2021 ခုနစ်အထိ နောက်ထပ်2လတိုးချဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပြီး ယခင်ကွာလတင်းဝင်ရက် 14 ရက်ကို 10 ရက်အထိလျှော့ချသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (นอกจากนี้ที่ประชุม ศบค. ยังขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก2เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 64 และลดมาตรการกักตัวเหลือ 10 วัน จากเดิม 14 วัน)
เราจะชนะโควิด19ไปด้วยกัน โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ဒီကိုဗစ်-19 ကပ်ရောဂါကို ကျွန်ုပ်တို့အနိုင်ယူဖြတ်ကျော်သွားကြမယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်းထမ်းများချမှတ်သည့်အတိုင်း ကျေးဇူးပြု၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးကြပါ။